एजेन्सी, २७ जेष्ठ । पाकिस्तानको सत्तारुढ दलकी नेता फिरदुस आशिक अवानले एक टेलभिजन संवादका क्रममा विपक्षी दलका सांसदलाई थप्पड हानेको भिडियो यतिबेला भाइरल बनिरहेको छ ।
संवादका क्रममा चर्काचर्की भएपछि अवानले पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका सांसदमाथि बसेको ठाउँबाट एक्कासि उठेर हातपात गरेको देख्न सकिन्छ । अवान पञ्जावका मुख्यमन्त्रीकी विशेष सल्लाहकार समेत हुन् । यसअघि उनले प्रधानमन्त्री इमरान खानको सूचना तथा प्रसारणसम्बन्धी विशेष सल्लाहकार समेत भएर काम गरेकी थिइन् ।
पत्रकार जाभेद चौधरीले चलाउने संवाद कार्यक्रम कल तकमा भनाभन भएपछि अवानले पिपुल्स पार्टीका सांसद कदिर खान मन्डोखाइलमाथि हातपात गरेकी थिइन् । सरकारको कामकारबाही र मुलुकका केही स्थानमा जारी अत्यधिक लोड शेडिङबारे भइरहेको छलफल सिन्धमा हालै भएको रेल दुर्घटनामा पुगेपछि दुबै पाहुनाबीच भनाभन हुन पुगेको थियो ।
चर्काचर्की र भनाभनबीच अवानले खानलाई थप्पड हानेकी थिइन् । लगत्तै खानले समेत प्रतिवाद गरेका थिए ।
उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तीव्रगतिमा फैलिएको छ । ट्विटरमा कतिपयले दोस्रो पटक सरकारी अधिकारी क्यामेरा अगाडि नै दुर्व्यवहारमा उत्रिएको र यो कुरा ठीक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘पाकिस्तानमा सहिष्णुताको असली रुप’ भन्दै मोना फारुक अहमदले ट्विटरमा व्यङ्ग्य गर्दै लेखेकी छन् ।
त्यस्तै कतिपय ट्विटर प्रयोगकर्ताले कार्यक्रम प्रस्तोता चौधरीको पनि उत्तिकै हात रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संवादलाई खराब हुन हुनबाट रोक्नका लागि उनले केही नगरेको भन्दै चौधरीको आलोचना भइरहेको छ । ‘यो घटनाका लागि जाभेद चौधरी समेत उत्तिकै जिम्मेवार छन्’, आइबेक्स न्युज नामक ट्विटल ह्यान्डलमा लेखिएको छ ।
कतिपयले अवान सार्वजनिक पद धारण गर्न असक्षम र अयोग्य भएको बताएका छन् । नइम सन्धु नामका ट्विटर प्रयोगकर्ता लेख्छन्- ‘फर्दुस आन्टीलाई चाँडो भन्दा चाँडो मानसिक स्वास्थ्य सेवाको खाँचो देखिन्छ नत्र भने अर्को पटक नियाजीलाई पनि आक्रमण गर्न सक्छिन् ।’
यसबाहेक, कतिपयले उक्त घटनापछि उत्पन्न मिम (meme) बाट आनन्द लिइरहेको पनि देख्न सकिन्छ । त्यस्तै सियद जैघुम काजमीले व्यङ्ग्य गर्दै लेख्छन- ‘यी महिला WWE मा जानुपर्ने राजनीतिमा के गरेर बसेकी छन् ?’ ‘पाकिस्तानकी नयाँ हेभिवेट च्याम्पियन, डा. फिरदुस आशिक अवान’, हाम्जा अजहर सलम नामका प्रयोगकर्ता लेख्छन् ।
Pakistan’s new heavyweight champion, Dr Firdous Ashiq Awan. #FirdousAshiqAwan pic.twitter.com/0mp2L1pIy1
— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 9, 2021